[विश्लेषण] जापानको सुखद सुरुआत- फिफा विश्वकप २०१८ - कान्तिपुर समाचार
असार ६, २०७५ नवीन न्यौपाने
काठमाडौँ — जापानले खेलको सुरुआती २० मिनेट आक्रमण रणनीतिमा खेल्यो । सुरुमै दबाब बनाएको जापानले पेनाल्टी प्राप्त गर्दै गोल भएपछि खेलमा पकड बनायो । कोलोम्बिया १० खेलाडीमा सिमित भएका कारण अग्रता लिएपनि दबाब बनाउन सक्यो ।
२० मिनेटपछि पोसेसनमा ध्यान दिएको जापानले हाफको अन्त्यतिर सानो गल्तीमा गोल खायो ।
कोलोम्बिया खेलमा पछि पारेपनि आक्रमण गर्ने योजनामै देखियो । एक खेलाडी कम भएका कारण काउन्टरमा बढी ध्यान दिएको कोलोम्बियाले पाएको अवसरको सदुपयोग गर्यो । फ्रिकिकमा गोलसँगै पहिलो हाफ १-१ को बराबरमा सकियो ।
दोस्रो हाफमा कोलोम्बिया केहि रक्षात्मक देखिंदा जापानले बल पोसेसन राख्दै आक्रमण बुन्न थाल्यो । डिफेन्सले संयमित भएर खेल्दा कोलोम्बियाको योजना सफल हुन सकेन । जापानलाई पनि अवसर सिर्जना गर्न कठिन भइरहेको स्थितिमा सेट प्लेबाट गोल निस्कियो । यसपटक विश्वकपमा सेट प्ले निकै फाइदाजनक देखिएको स्थितिमा जापानले पनि अग्रता लिन कर्नरकै मदत लियो ।
अन्तिम १० मिनेटमा गोल फर्काउन आक्रामक भएको कोलोम्बियाले जापानी डिफेन्स चिर्न सकेन । सुरुआती जितले जापानलाई धेरै फाइदा पुगेको छ । कोलोम्बियाजस्तो बलियो टोलीलाई हराउनुले समग्र एसियालाई सुखद सुरुआत प्राप्त भएको छ ।
पहिलो हाफ पोल्यान्डले लामो पास राखेर बल पोसेसनमा ध्यान दिने रणनीति लिएको थियो । आक्रमणको अन्तिम क्षणमा भने योजना सफल भएको देखिएन । सेनेगलको डिफेन्सले लगातर आक्रमण निस्तेज पार्दा पोल्यान्डको डिफेन्समा भने समस्या देखियो । लगातार मौका सिर्जना गरेको सेनेगलले गोल गर्ने अवसर सिर्जना पनि गरेको थियो । आक्रमणमा निकै तेज देखिएको सेनेगलले पोल्यान्डको डिफेन्सलाई दबाब दिने योजना सफल भयो । आत्मघाती गोलमार्फत अग्रता लिएको सेनेगलले दोस्रो हाफमा पनि सोहि रणनीति लियो ।
पहिलो हाफमा पछाडी पारेको पोल्यान्डले फरवार्ड लेवान्डोस्कीलाई खेलमा ल्याउन स्विच प्ले गर्दै क्रसिङमा ध्यान दियो । तर उनले अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेनन् । दोस्रो हाफमा केहि रक्षात्मक देखिएको सेनेगलले काउन्टरको सहारामा आक्रमण बुन्यो । पोल्यान्ड डिफेन्समा भएको गल्तिको फाइदा उठाउंदै अग्रता दोब्बर पारेपछि सेनेगल संयमित भयो । पोल्यान्डले अन्तिमतिर सेट प्लेमा गोल गरेपनि निकै ढिला गोल निस्कियो । सेनेगलका मानेले आक्रमणमा सोचे अनुसार खेल्न नसकेपनि जित दर्ता गर्न सफल भए ।
रसियाले साउदीविरुद्ध पहिलो खेलमा सफल भएको रणनीति लिएर इजिप्टविरुद्ध पनि फास्ट अट्याकमै ध्यान दियो । लगातार इजिप्टको डिफेन्सलाई दबाब दिएको रसियाले दुवै हाफको सुरुआती १५ मिनेट र हाफको अन्तिम ५ मिनेट थप आक्रामक देखियो । दबाब दिएर विपक्षीलाई पछाडी राखेपनि सुरुआतमा आक्रमण सफल भएन । शारीरिक रुपमा निपुण आर्टेम ज्युबालाई टार्गेट म्यान बनाएर क्रसलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखियो ।
यता मोहमद सलाहको आगमनसँगै इजिप्टले पनि आक्रामक खेलेको थियो । पहिलो खेल हारेको कारण अंक जोड्नैपर्ने स्थिति रहेको इजिप्टले स्विच प्ले गर्दै आक्रामक बुनेको थियो । खेल दौरान पोसेसन आफ्नो पक्षमा भएपनि गोल निस्कन सकेन ।
दोस्रो हाफमा रसियाको योजना सफल भयो र सुरुमै गोल निस्कियो । लगातार दबाब दिएपछि इजिप्टका डिफेन्सको गल्तीमा रसियाले अग्रता लियो । गोल गरेपछि पनि आक्रामक देखिएको रसियाको क्रस गर्ने योजना सफल भयो र लगातार गोल पनि निस्कियो ।
इजिप्टको डिफेन्समा मार्कीङ कमजोर हुँदा रसियाले मौका सदुपयोग गर्यो । इजिप्टले पोसेसनसहितको अट्याक गरेर अन्त्यतिर पेनाल्टी पनि पायो । तर तीन गोल पछि पारेको अवस्थाबाट फर्कन सकेन । सलाहको प्रदर्शन कमजोर हुँदा इजिप्ट समूह चरणबाटै बाहिरिने सम्भावना रहेको छ ।
प्रकाशित : असार ६, २०७५ १०:००
‘मस्तिष्क हैन, मनका सिर्जना’
काठमाडौँ — केहीअघि कवि वसन्त चौधरीले एउटै कविता कृति नौवटा भाषामा ल्याएका थिए । नेपालीसँगै अंग्रेजी, तामाङ, हिन्दी, नेवार, मैथिली, बंगाली, भोजपुरी र मारवाडी भाषामा प्रकाशित ‘वसन्त’ माथि मंगलबार राजधानीमा अन्तरक्रिया गरियो ।
समालोचक डा. सावित्री मल्ल कक्षपती, डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतम र कुमारी लामाले वसन्तको कृतिमाथि
टिप्पणी गरे ।
कक्षपतीले एउटै कृति नौ भाषामा आउनु नै उपलब्धिमूलक रहेको बताउँदै चौधरीका अधिकांश रचनामा सकारात्मक भाव भेटिने दाबी गरिन् । ‘दिमागले नभई मनले लेखेका कविताहरू कृतिमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरल तर गहिरो जीवनदर्शन वसन्तका कवितामा भेटिन्छ । हरेक प्रेमिल रचनाभित्र दार्शनिकता लुकेको पाइन्छ ।’
डा. गौतमले वसन्तका कविताहरूमा अभिव्यक्त प्रेमभाव खहरे खोलाजस्तो नभएको दाबी गरे । कविताहरूमा शालीन र एकनासको प्रेमिल अनुभूति पाइने बताउँदै केही कविता भने सौन्दर्य अलिक कम देखिएको टिप्पणी गरे । लामाले कविताहरू प्राय: प्रेमभावले भरिएको बताउँदै ‘प्रेमको दायरा र कल्पनाशीलता भने फराकिलो पाएको’ दाबी गरे । उनले चौधरीलाई ‘प्रेममा मात्रै लेखनलाई सीमित नराखी अन्य सामाजिक विषयवस्तुतिर पनि लाग्न’ सुझाइन् ।
यी सबै सल्लाह र सुझाव मनन गर्दै चौधरीले चाहिँ आफू संयोगले साहित्यमा आएको सुनाए । ४० को दशकदेखि कलम चलाउन थालेका उनले मनमा आएका भावनालाई उतार्दै जाँदा साहित्य लेखनतिर तानिएको बताए । ‘म साहित्यका धेरै नियम र पक्षहरू बुझदनँ,’ उनले भने, ‘तर, मनमा आएको
कुरा लेखिहाल्छु ।’
दिल्लीबाट ‘चाहतों के साये में’
हालै कवि चौधरीको पछिल्लो कविता संग्रह ‘चाहतों के साये में’ नयाँ दिल्लीमा लोकार्पण गरिएको छ । बलिउडका वरिष्ठ गीतकार समीर ‘अनजान’ ले गत शुक्रबार कविता संग्रहको सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘चाहतों के साये में’ टाइम्स ग्रुप बुक्सले छापेको हो । कृतिमा चौधरीले हिन्दी र उर्दू मिश्रित भाषामा लेखेका कविता, गीत, गजल तथा नज्महरूलाई समेटेका छन् ।
पुस्तकसँगै चौधरी लिखित सात गीत समेटिएको सीडी एल्बम पनि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । एल्बममा बलिउडका चर्चित गायक/गायिका सोनु निगम, श्रेया घोषाल, रूपकुमार राठौड र मोहित चौहानको स्वर रहेको छ ।
नयाँदिल्लीस्थित होटल हयात रिजेन्सीको सभाहलमा आयोजित समारोहमा केही गीतको म्युजिक भिडियोसमेत प्रदर्शन गरियो । गीतकार समीरले चौधरीको पुस्तक सरल र श्रोतामुखी रहेको बताए । कवि एवं भारतको उत्तराखण्ड राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ले ‘कवि चौधरीको कृति नेपाल–भारत सम्बन्ध बलियो बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम बन्न सक्ने’ दाबी गरे ।
भारतका वरिष्ठ कवि, साहित्य समीक्षक एवं समालोचक बालस्वरूप राही तथा हंसराज कलेजका प्राचार्य डा. रमाले ‘चाहतों के साये में’ माथि विद्वत् टिप्पणी गरे ।
कवि चौधरीले आफ्ना धेरै रचना प्रेम र इच्छामा डोहोरिएको भए पनि त्यो स्त्री र पुरुषबीच प्रेम र इच्छा मात्रै नभई त्योभन्दा पर रहेको बताए । ‘चाहतों के साये में’ लाई यही असार ११ गते भारतको मुम्बईमा समेत लोकार्पण गरिने टाइम्स ग्रुप बुक्सले जनाएको छ ।